FAMPANDRIANA FAHALEMANA MANDRITRA NY FIFIDIANANA :: Hiatrana am-bavabasy ny pôlisy, zandary ary tafika • AoRaha
FAMPANDRIANA FAHALEMANA MANDRITRA NY FIFIDIANANA Hiatrana am-bavabasy ny pôlisy, zandary ary tafika
Nantsoina avokoa ny mpitandro filaminana rehetra hamonjy ny tobiny, anio. Mivonona hitandro ny filaminana mandritra sy aorian’ny fifidianana no baiko homena azy ireo, araka ny tsilian-tsofina.
Nohamafisin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, Kaomandin’ny Zandarimaria io, omaly, tamin’ny antso an-tariby. “Miatrana avokoa ny mpitandro filaminana manomboka rahampitso (ndlr : anio)”, hoy izy. Ankoatra izay nilaza ihany koa ny Péfet de police eto Antananarivo renivohitra fa “tsy azon’ny mpitandro filaminana atao ny miditra ao amin’ny biraom-pifidianana raha tsy mahazo baiko avy amin’ny filohan’ ny birao fandatsaham-bato”, hoy izy.
Hatramin’ny andro maizina
Amin’ny maha andro manokana eo amin’ny tantaram-pirenena ny alarobia 7 novambra dia azo antoka ny hisian’ny fepetra manokana horaisin’ny mpitandro filaminana. Misafidy ny tsy hilaza ny antsipiriany momba ireo fepetra horaisiny ireo ny lehiben’izy ireo. “Efa misy ny paikady homanina hisorohana ny mety ho fanakorontanana saingy tsy azo ampahafantarina ny rehetra izany”, hoy ihany ireo tompon’ andraikitry ny fitandroana ny filaminana.
Ny eo anivon’ny Pôlisim-pirenena dia fantatra fa nandray ny fepetra tato anatin’ny andro vitsy lasa izay, toy ny namerenana miasa ireo pôlisy rehetra nahazo fialan-tsasatra. “Nahantona vonjimaika tsy misy mahazo fialan-tsasatra ireo izay nangataka izany noho ny maha andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny firenena an’io 7 novambra io”, hoy ny fanazavan’ny Contrôleur général Rafanomezantsoa Roger, tale jeneralin’ny Pôlisim-pirenena. Hiantoka ny fitandroana ny filaminana mandritra sy aorian’ny fifidianana no anton’io fepetra io, araka ny fantatra.
Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana, dia voalaza fa ankoatra ireo mpitandro filaminana hitoby amin’ny toerana sasany eto an-drenivohitra, izay ho vonona avy hatrany raha misy ny antso, dia hisy ihany koa ireo mpitandro filaminana handeha fiara hivezivezy manerana ny renivohitra. Hohamafisina io fepetra io, indrindra rehefa manomboka miha maizina ny andro amin’ny 7 novambra.
Manamafy ny Kaomandin’ny zandarimaria fa “tsy ny eto an-drenivohitra ihany no miatrana ireo zandary fa manerana ny Nosy mihitsy”, hoy izy. Miantso ny rehetra tsy hisalasala fa hampandre hatrany ny mpitandro filaminana na amin’ny tranga heverina ho kely aza ireo lehiben’ny zandarimaria sy pôlisy mba hahafahan’ izy ireo mandray fepetra avy hatrany.
Basy mahery vaika
TSINDRON’ANTSY :: Tratra ireo namono mpianatry ny oniversite